Somaliland: Ninka Somaliland wax ka sokeeya wadoow adeer iska daa’ Talada Dadkan.”Sheekh Aadan-Siiro - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Ninka Somaliland wax ka sokeeya wadoow adeer iska daa’ Talada Dadkan.”Sheekh...
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa Hoggaamiyeyaasha Xisbiyada Somaliland kula taliyey inay Ummadda ka daayaan Khilaafaadka, si looga baaqsado Mushkilado amni daro oo Dalku waajaho.
Sheekha oo Khudbaddii Jimcaha ee Shalay kaga hadlay Arrimo ay ka mid yihiin Khilaafaadka Siyaasadeed ee Xisbiyada qaarkood u dhexeeya, ayaa ka digay in muranka iyo Hadallada Naxliga ah ee Warbaahinta ay isku marinayaan ay sii kala fogeynayaan Shacabka, sidaa daraadeedna loo baahan yahay inay ka waantoobaan.
Sheekha Aadan-Siiro oo ugu horeyn ka hadlaya Musuqmaasuq iyo Maamul-xumo uu sheegay inay Somaliland ka jirto, ayaa yidhi, “Sunnuhu waa inaad nolosha fahamto, Sunnaha aynu ka hadlaynaa waa inaad fahamto haddaad qaadato Go’ ka dhexeeya Muslimiinta inaad Naar ku gelaysid. Maxaanu uga hadalnaa Boobka Hantida Ummadda ?, Maxaanu uga hadalnaa in waxa Dadka ka dhexeeya la ilaaliyo? waa asalka Ummadda, waa waxa loo sameeyay Khudbadda (Jimcaha)..”
Sheekhu wuxuu sheegay in Cid gaar ah la siiyey Dhul ay Dekedda Berbera lahayd, “Waa Maxay dhibta Ummadda haysataa, Dalkan waxa ka jira Maamul Xumo iyo Musuqmaasuq.
Berbera ayaan tagay anigoon Saddex Sannadood tagin, waan isbeddelay oo waan ilmeeyay markaan Dekedda tagay, Dekedda badhtankeedii-baa la qaatay, ILAAHAY yaab-buu kuu keenaya, Qof Damiir lihi (Waxaas ma sameeyo). Meeshan yaa qaatay..hebel oo ah Cisaabaadka Dalka haysta, halkana yaa qaatay, Hebel oo ah kuwa wax la qabsada (Cisaabaadka). Dhul aan ku qiyaasay 1000 Mitir oo ah Dhulkii Dekeddu lahayd weeye (Dhulka la qaatay).”ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu ka hadlay Khilaafaadka Siyaasiga ah ee Xisbiyada Somaliland qaarkood, “Nimanka Xisbiyada Hoggaaminaya waxaanu kula talinaynaa Waar Dadka Khilaafka ka daaya, Dalka waa la wada leeyahay oo Cid gaar u lihi ma jirto, Ummadda waxaanu u sheegaynaa waxaan la taaban karin baa jira, Somaliland ahaan waxaynu ku heshiinay Cid taaban kartaa ma jirto, Wadaad-baan ka bixi karin, Guurtida ayaan furi karin, Baarlamaanka ayaan furi karin, fulinta ayaan furi karin, Waayo? Dastuurkeena waxa u codeeyay 97%, markaa Somaliland waa aasaasiyaadka aynu ku heshiinay ee aynu ku wada joogno.”
Sheekhu waxa kale oo uu sheegay, “Ninka Maanta ku baaqaya in Dadka Qabaa’il loo kala fadhiisiyo, oo Reero laga sheekeeyaa wuu dhacay, oo maaha kii sii wada karayey ee loo baahnaa. Wuxuu doono ha ahaado ee Ninka Maanta doonaya inuu sameeyo Xisbi reereed waxaanu leenahay habeen maad jirin, Somaliland-na sidaa kuma shaqeynayso. Ninka intan soo kala gur-gurayoow meel madhan baa haysaa, Waayo? Waxaynu Xisbiyada u samaysanay inaynu kaga maarano in reer Walba dhiniciisa goosto.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey, “Ninka Somaliland wax ka sokeeya wadoow adeer iska daa’ Talada Dadkan.”
Deg Deg: Magaalada Jig-Jiga Oo Saaka Ay La Wareegan Ciidamo New Boolis Ah Iyo Bandow Lagu Soo Rogay
Somaliland: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Xadhigga Ka Jaray Wiish Cusub Oo Dekedda Berbera Loo Keenay, Soona Kormeeray Marsada Cusub Ee Dhimaheedu Socdo.